कति कमाउदा कति कर तिर्नुपर्छ ? यस्तो छ नयाँ आयकर दर सुची सहित – Himshikharnews.com
कति कमाउदा कति कर तिर्नुपर्छ ? यस्तो छ नयाँ आयकर दर सुची सहित
१८ श्रावण २०७६, शनिबार ००:१०
हामीले सरकारलाई कुनै न कुनै रुपमा कर बुझाउनैपर्छ । यदि वाध्यताबस सरकारलाई कर बुझाउनु भएन भने सरकारी कारबाहीमा पर्न सक्नुहुन्छ ।
सरकारले साउन १ गतेबाट लागू हुने गरि नयाँ आयकरको दर निर्धारण गरेको छ ।
सरकारले हरेक वर्ष व्यक्तिले गर्ने आर्यआर्जनबाट लिने करको दायरा बढाएको छ । राज्यको नागरिकबाट सरकारले विभिन्न तवरबाट कर संकलन गर्दै आएको छ ।
सोहीअनुरुप सरकारले पनि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि आयकरको दर निर्धारण गरिसकेको हो । निर्धारण भएको कर साउन १ गते अर्थातबाट लागू हुनेछ ।
अविवाहितको हकमा (वार्षिक) लाग्ने आयकरः ४ लाख रुपैयाँसम्म १ प्रतिशतको दरमा ४ हजार रुपैयाँ
२० लाखभन्दा बढी आम्दानीको हकमा भने ७ लाखदेखि २० हजार रुपैयाँमा लागेको ३० प्रतिशत करमा थप २० प्रतिशत अर्थात् ३६ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्दै जानुपर्छ । यसको अर्थ २१ लाख आम्दानी हुनेले ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
२० लाखभन्दा बढीको आम्दानीमा भने ७ लाख ५० हजारदेखि २० लाख रुपैयाँमा लागेको ३० प्रतिशत करमा थप २० प्रतिशत अर्थात् ३६ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्दै जानुपर्छ । यसको अर्थ २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुनेले ४ लाख ६५ हजार ५ सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले साउनदेखि कुनैपनि कम्पनी तथा फार्म तथा निकायले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) बिना तलब दिन रोक लगाउने भएको छ । तलब दिँदा प्यान नभएका कर्मचारीलाई खर्च कट्टी गर्न नपाउने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै कुनै पनि कम्पनी तथा फार्मले साउनदेखि सबै कर्मचारीलाई बैंक खातामार्फत तलब भुक्तानी गर्नुपर्छ । त्यसमा प्यान नम्बर समेत उल्लेख हुनुपर्छ ।